TPS Sudan | သင့်ရဲ့ TPS ကုန်ဆုံးလျှင်သင်ဘာလုပျနိုငျ? | USAHello
TPS ဆူဒန် - သင့် TPS ကုန်ဆုံးတဲ့အခါသင်အဘယ်သို့ပြုနိုင်?
ဓာတ်ပုံ: Kalle Eko for the Gazette
Update ကိုနိုဝင်ဘာလ 4, 2019: TPS for Sudan has been extended.
တစ်ထုတ်ဝေအမေရိကန်အစိုးရ ဖက်ဒရယ်မှတ်ပုံတင်မည်အတွက်အသိပေးစာ. အဆိုပါအကြောင်းကြားစာအယ်လ်ဆာဗေးဒေါက TPS ပြောပါတယ်, ဟေတီ, နီကာရာဂွာ, ဆူဒန်, TPS တရားရုံးတွင်အမှုပေါင်းအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်အထိဟွန်ဒူးရပ်စ်နှင့်နီပေါတိုးချဲ့နေသည်. If you have TPS for Sudan, သင့်ရဲ့ TPS စာရွက်စာတမ်းများကိုအလိုအလျောက်ဇန်နဝါရီလမှတိုးချဲ့နေကြသည် 4, 2021.
ဤသည်အသိပေးစာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားရုံးအမှု၏ဖြစ်ပါသည်. သင်နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုသိရန်တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အဘို့စောင့်ဆိုင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. ငါတို့ကဲ့သို့မကြာမီကျနော်တို့နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရှိသည်အဖြစ်ဒီစာမျက်နှာကို update ပါလိမ့်မယ်.
အဆိုပါအကြောင်းကြားစာ extension ကိုအလိုအလျောက်ကြောင်းပြောပါတယ်. ယင်းအပေါ်ထပ်မံမွမ်းမံမှုများအဘို့အကွညျ့ရှု USCIS Sudan information page.
အဆိုပါအကြောင်းကြားစာအလိုအလျောက် extension ကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်ပြုချက်စာရွက်စာတမ်းများသက်ဆိုင်ပြောပါတယ် (EADS).
သငျသညျကောင်းသောအကြောင်းရင်းရှိပါက USCIS တစ်နှောင်းပိုင်းကမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ် re-မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာကိုလက်ခံစေခြင်းငှါ. အဆိုပါကိုသွားပါ USCIS TPS information page and click on “Filing Late” to find out if you qualify.
You can find ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့နိုင်ငံ၏အမေရိကန်သံရုံးက်ဘ်ဆိုက်.
သံရုံး၏လိပ်စာဖြစ်ပါသည် 2210 Massachusetts Ave NW, ဝါရှင်တန်, DC က 20008.